Onye na -emepụta ihe na onye na -ebubata ihe na -eweta ngwongwo CCMIE
Oke ikike ibuli elu 37t
Ụdị njikwa redio njikwa ikuku/njikwa akwụkwọ ntuziaka
Tinye akwụkwọ maka ọkọlọtọ 20ft
Trailer Container Lift Trailer nwere ike ghọta ngwa ngwa njikwa ngwa ngwa ma e jiri ya tụnyere ụzọ ọdịnala. Anyị na -eji akpa Lift Trailer, anyị nwere ike ijikwa usoro ụgbọ njem niile, enweghị mkpa agba agba na nnọkọ nke atọ, yabụ onye ọrụ enweghị mkpa ichere ogologo oge, ghọta njem ozugbo. Mgbe anyị na -eji ụgbọala na -adọkpụ ụgbọ ala, ọ nweghị ngwa ọ bụla ọzọ na -ebuli elu, ọ dịghị anyị mkpa iji nnukwu ndụdụ ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ na -agagharị agagharị, ọkachasị, were n'ọrụ ma ọ bụ zụta ọnụ ahịa krenkụl mkpanaka dị elu ma dị elu. Iji ụgbọala na -adọkpụ ụgbọala na -adọkpụ nwekwara ike belata ihe egwu na ọnụ ahịa nke igbu oge ibuga ngwa ahịa ndị ahịa. Ọ nwere ike inyere gị aka iwulite mmekọrịta ka mma na ndị ahịa.
Site na nkwukọrịta teknụzụ anyị na ndị ọrụ, anyị na -akwalite ngwaahịa mgbe niile ma hụ na ịdị mma nke ihe ngwọta na -emezu ụkpụrụ ahịa na ndị na -azụ ahịa. Azụmaahịa anyị ewepụtala usoro mmesi obi ike kacha mma nke ire ụlọ ọrụ China CCMIE 2 axle 40FT frame nke nwere trassis akpa na cran lifter n'akụkụ. Anyị ji ezi obi na-anabata ndị na-ere ahịa ụlọ na ndị si mba ọzọ na ndị ọrụ njedebe ka ha kpọọ, ma ọ bụrụ na ị ga-ajụ ajụjụ, ma ọ bụ bịa nleta ụlọ ọrụ na mkparịta ụka, anyị ga-enye gị ngwaahịa dị oke mma na ngwọta zuru oke, gbakwunyere ntuziaka ahịa anyị nwere ịnụ ọkụ n'obi, yana ọrụ ahịa mgbe ahịa gasịrị. , anyị na -atụ anya ọbịbịa gị na imekọ ihe ọnụ gị.
Nkwalite ụlọ ọrụ akpa akụkụ akụkụ, akpa ruru stacker nwere ike ịnabata iwu ahaziri iche nke ogo dị iche iche yana atụmatụ pụrụ iche nke ndị ahịa. Anyị nọ na-atụ anya iguzobe mmekorita azụmaahịa ogologo oge nke ọma yana ndị ahịa n'ụwa niile.
Ịkpachara anya ọrụ:
N'oge nbuli elu, gbaa mbọ hụ na onye na -ahụ maka ọrụ nwere echiche doro anya maka ngwongwo, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, kenye nwoke ruru eru ka ọ nyere ya aka n'ọrụ ya. Onye na -arụ ọrụ na -eguzo n'otu akụkụ ka ebuli ngwongwo, debe ma ọ dịkarịa ala 2m site na njedebe nke ụgbọ ala, Onyonyo 3.6 bụ mpaghara ọrụ akwadoro maka onye na -arụ ọrụ. Mgbe ewepụrụ akpa na Container Lift Trailer iji zụọ, mpaghara ọrụ onye na -arụ ọrụ dị mita abụọ site na njedebe nke ụgbọ ala, yana onye na -arụ ọrụ.
nwere nlele doro anya maka ụgbọ ala na ụgbọ oloko. Ọgụgụ 3.6 mpaghara ọrụ nke onye na -arụ ọrụ
Onye na -arụ ọrụ agaghị ahapụ njikwa ime obodo mgbe ebuli ibu ma ọ bụ kreenụ na -agba
Nke gara aga: Loader n'akụkụ
Osote: Ụgbọ ala na -eburu akụkụ